EXCEL ကိုအတွက် MMULT FUNCTION ကို - EXCEL ကို - 2019
Microsoft က Excel ကိုအတွက်လျှောက်လွှာ MMULT function ကို
လူသိများသည်နှင့်အမျှ, Excel ကိုအစီအစဉ်ကိုမက်တရစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ဘို့အများကြီး tools တွေရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က function ကို MMULT ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်နှင့်တကွ, အသုံးပြုသူကွဲပြားခြားနားသောမက်တရစ်များပြားနိုင်ပါတယ်။ ရဲ့အလေ့အကျင့်၌ဤ function ကိုသုံးပါနှင့်သူမ၏အတူလုပ်ကိုင်၏အခြေခံတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဘာတွေလုပ်နေလဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြပါစို့။
အဓိကရည်မှန်းချက် function ကို MMULTအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနှစ်ခုမက်တရစ်၏အမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်္ချာအော်ပရေတာများ၏အမျိုးအစားကပိုင်ဆိုင်သည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒီ function ကို၏ syntax ဖြစ်ပါသည်:
= MMULT (array1 array2)
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, အော်ပရေတာနှစ်ခုသာအငြင်းပွားမှုများ - "Array1" နှင့် "Array2"။ အဆိုပါအငြင်းပွားမှုများတစ်ခုချင်းစီကိုများပြားစေရမည်ဖြစ်သည့်မက်တရစ်၏တဦးတည်းမှတစ်ဦးကိုကိုးကားသည်။ ဒါကအထက် ပေး. စီရင်ရာဖြစ်တယ်။
၏လျှောက်လွှာများအတွက်အရေးပါသောအခွအေနေ MMULT ဒါဟာပထမဦးဆုံး matrix ကိုတန်း၏နံပါတ်ဒုတိယကော်လံ၏နံပါတ်ကိုက်ညီရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မှားယွင်းမှုတစ်ခုကုသမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်အမှားတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ဦးစလုံးသည် array ရဲ့ဒြပ်စင်အဘယ်သူအားမျှအချည်းနှီးမဖြစ်ရ, သူတို့သည်လုံးဝနံပါတ်များထားရှိရေးရမည်ဖြစ်သည်။
အခုကွန်ကရစ်ဥပမာကိုယူပါစေ, ငါတို့နှစ်ဦးကိုမက်တရစ်များပြားနိုငျပုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, အော်ပရေတာကို အသုံးပြု. MMULT.
ပြီးသားနှစ်ခုမက်တရစ်ရှိပါတယ်ပေးသော Excel ကိုသင်ထောက်ကူ, ဖွင့်ပါ။ အလျားလိုက်ပထမဦးဆုံး matrix ကိုတန်းတစ်အရေအတွက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ဒုတိယ matrix ၏ကော်လံ၏နံပါတ်ထည့်သွင်းထားတဲ့, အလွတ်ဆဲလ်များ၏ဒေသကနေခွဲခြား။ ထို့နောက် icon ကို click "Insert ရာထူးအမည်"သောပုံသေနည်းဘားအနီးနေရာချနေပါတယ်။
အဆိုပါလွှတ်တင် function ကို wizard ကို။ ကျနော်တို့၏အမျိုးအစားသို့သွားသင့်တယ် "သင်္ချာ" သို့မဟုတ် "တစ်ဦးကအပြည့်အဝအက္ခရာစဉ်စာရင်း"။ အဆိုပါအော်ပရေတာနာမည်တစ်ခုစာရင်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ် "MMULT", ခလုတ်ကိုပေါ်မှာကိုရွေးပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ"သောဤ window ၏အောက်ခြေတွင်ချထားသည်။
ပြေးပြတင်းပေါက်အော်ပရေတာအငြင်းပွားမှုများ MMULT။ သငျသညျမွငျနိုငျကြောင့်ကွက်လပ်နှစ်ခုကိုရှိပါတယ်: "Array1" နှင့် "Array2"။ ပထမဦးဆုံး၌သငျဒုတိယ၏, အသီးသီး, ပထမဦးဆုံး matrix နှင့်ဒုတိယ၏သြဒီနိတ်သတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ပထမဦးဆုံးလယ်ပြင်၌ရှိသော cursor ထားကြ၏။ ထို့နောက်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ် Clamp နှင့်ပထမဦးဆုံး matrix ကိုပါဝင်တဲ့ဆဲလ်တွေ၏အကွာအဝေးကိုရွေးပါ။ ရွေးချယ်ထားသောလယ်ပြင်၌ပြသသည်ဤရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသြဒီနိတ်ဖျော်ဖြေပြီးနောက်။ အလားတူလုပ်ရပ်များဒုတိယ matrix ကို select လုပ်ပါ, လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိမ့်ချကိုင်ပြီးအားဖြင့်၎င်း, ဒုတိယလယ်ကွင်းတွေနဲ့, သာဤအချိန်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
နှစ်ဦးစလုံးမက်တရစ်၏လိပ်စာများခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့မတစ်ဦးလျင်အတွက်သိမ်းဆည်းထားသည်ပြီးနောက် "အိုကေ"ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိပြီး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့စစ်ခင်းကျင်း function ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမရလဒ်သမရိုးကျလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ကဲ့သို့၎င်း, တခါတပြင်လုံးကိုအကွာအဝေးအတွက်တစ်ခုတည်းဆဲလ်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ကြောင်းပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအော်ပရေတာသုံးပြီး data ကိုဖွင့်ပြသရန်, သော့ကိုနှိပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး ဝင်ရောက်ယင်းပုံသေနည်း bar မှာ cursor အားမရခြင်းအားဖြင့်, ဒါမှမဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ"ယခုအချိန်တွင်အတွက်ကဒီမှာဖွင့်လှစ်သော function ကိုငြင်းခုံင်းဒိုးထဲမှာနေစဉ်။ ကီးဘုတ် shortcut ကိုလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောကြောင့် ကို Ctrl + Shift + Enter။ ငါတို့သည်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ခလုတ်ကိုလုပ်ဆောင် "အိုကေ" ကျနော်တို့မထိကြဘူး။
သင်သော့ဒိုးကိုအော်ပရေတာအငြင်းပွားမှုများ၏ဤပေါင်းစပ်နှိပ်ပြီးနောက်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ MMULT အပိတ်နှင့်ငါတို့ကဲ့သို့အစောပိုင်းဒီကို manual ၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းဆဲလ်များ၏အကွာအဝေးဒေတာနှင့်ပြည့်စုံပြီ။ ဒါဟာအော်ပရေတာများကခေါ်ဆောင်သွားသောဤတန်ဖိုးများကိုသည်နှင့်တယောက်ကိုတယောက် matrix များ၏မြှောက်၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း MMULT။ သင်ပုံသေနည်း bar မှာကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, ထို function ကိုက Array ကို၏အော်ပရေတာမှပိုငျဆိုငျခွငျးကိုဆိုလိုသသောဆီကိုဦးအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
ဒါပေမယ့်အတိအကျဘာအပြောင်းအလဲနဲ့ function ကို၏ရလဒ် MMULT လိုအပ်ခဲ့လျှင်တစ်ခုလုံးခင်းကျင်းသည်၎င်း၏နောက်ထပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကာကွယ်ပေးသည်။ သငျသညျကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားသည့်အခါရလဒ်၏နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအများ၏နံပါတ်များကိုမဆိုသင်တစ်ခင်းကျင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမပြောင်းနိုင်သောအကြောင်းကြားတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုစောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မည်။ ဒီအဆင်မပြေပပျောက်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ရသောနှင့်အတူအချက်အလက်များ၏ပုံမှန်အကွာအဝေးအတွင်းမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများခင်းကျင်းပြောင်းဖို့, အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
အကွာအဝေးကို Select လုပ်ပါနှင့် tab ကိုစဉ် "အိမ်", အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Copy ကူး"ဒီ tool ပိတ်ပင်တားဆီးမှုထဲတွင်နေရာသော "Clipboard"။ ဒါ့အပြင်အစားဒီစစ်ဆင်ရေးကိုသင် keyboard shortcuts တွေကိုအစုတခုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ပြီးရင် Ctrl + C ကို.
ထို့နောက်အကွာအဝေးကနေခွဲဝေချထားမဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲ, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါလုပ်ကွက်အတွက်အခြေအနေတွင် Menu ထဲမှာ "Paste Options ကို" ကို item ကို select "တန်ဖိုးများ".
ဒီစစ်ဆင်ရေးဖျော်ဖြေပြီးနောက်ရရှိလာတဲ့ matrix ကိုမရှိတော့တစ်ခုတည်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အကွာအဝေးအဖြစ်ပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့အမျိုးမျိုးသောထိန်းသိမ်းရေးဖျော်ဖြေဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက် Array ကိုအတူလုပ်ကိုင်
သငျသညျ, အအော်ပရေတာကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ MMULT ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပေါ် Excel ကိုနှစ်ခုမက်တရစ်များပြားဖို့အတော်လေးမြန်ဆန်လွယ်ကူသောခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီ function ကို၏ syntax အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပြီး, အသုံးပြုသူများအငြင်းအခုံ box ထဲမှာဒေတာဝင်မပြဿနာရှိသင့်ပါတယ်။ ဒီအော်ပရေတာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါပေါ်ထွန်းနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောပြဿနာကတစ်ခုခင်းကျင်း function ကိုသည်နှင့်, အရှင်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ input ကိုငြင်းခုံထိုကဲ့သို့သောဒေတာအမျိုးအစားနှင့်အတူစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အဆင်ပြေအောင်သော့တစ်ဦးကိုအထူးပေါင်းစပ်၏တွက်ချက်မှုလျှောက်ထားပြီးနောက်ထို့နောက် pre-ခွဲဝေချထားပေးရန်တစ်စာရွက်ရန်လိုအပ်သည်, နှင့်သင့်လျော်သောအကွာအဝေးမှရလဒ် output ကိုမှ - ကို Ctrl + Shift + Enter.